Ngwa ngwa ngwa 120W nwere ike ibido na Vivo Nex 3 | Gam akporosis
A na-atụ anya na Vivo Nex 3 A ga-ebido ya n’ọnwa Septemba nke afọ a, ọnwa nke ga-amalite ugbu a ebe ọ bụ na ọ fọrọ naanị ụbọchị anọ ka anyị pụọ ya. Companylọ ọrụ China ahụ achọpụtala ihe a na izu ole na ole gara aga, nke nyere anyị ohere igosipụta ọtụtụ njirimara ya, yana ọtụtụ njirimara nwere ike ịdị na atụmatụ ọ ga-egosi.
Ihe kachasị ịtụnanya, ikekwe, bụ teknụzụ na-agba ngwa ngwa ị ga-enweta. Mgbe ekwurula na sị panel ga-curved na ihuenyo-ka-ahụ ruru ga-fọrọ nke nta 100%, nke a mara nwere ike kpuchie site na 120 watts na ọnụ batrị ga-akwado maka ụgwọ ọ bụla. O doro anya na nke a abụghị ihe ijuanya, anyị na-abanye n'ime ya.
Ọhụrụ anyị lekwasịrị anya ugbu a gbasara ngwaọrụ a na-agwa anyị nke ahụ ga-abịa na 120W Super FlashCharge, Nchaji teknụzụ na-ekwe nkwa ịgba ụgwọ batrị ikike 4,000 mAh site na 0% gaa na 100% na naanị nkeji 13, dịka ihe ụlọ ọrụ China kwuru na June afọ a, nke bụ mgbe o gosipụtara ya site na mmemme ngosi.
N'ikwekọ n'ihe ụfọdụ gosipụtara na-atụ anya, Vivo Nex 3 nwere ike ịnwe batrị 6,400 mAh buru ibu, nke ga-enye nnwere onwe dị ezigbo mkpa. O di nwute, enweghi ihe akaebe doro anya iji kwado nkwuputa a, ya mere, ekwesighi ịdabere na ya karia, karia karia mgbe ekwuru na nkogha di otua puru ibu n'ihi nkowahie nke uzo ozo enyere. Ederede '6400' nke pụtara na leaked image gosiri n'elu ga-ederịta akwụkwọ ozi nke 64 megapixel mkpebi ihe mmetụta na ọ ga-ụlọ ya n'azụ foto modul.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » 120W Super FlashCharge ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ nkà na ụzụ nwere ike ịmalite na Vivo Nex 3
PPde OPPO Reno 2 sii n’ananmu